कहिले पनि नछुट्ने मायालु जोडी ! यी राशि हुने प्रेमी प्रेमिकाहरु कहिले पनि छुट्दैनन् ! - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७७ कार्तिक २३ गते १४:०३ मा प्रकाशित
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन्,जुन राशि भएका प्रेमी प्रेमिका कहिले पनि छुट्दैनन् । उनीहरूको सम्बन्छ एकदमै बलियो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार नै १२ राशि रहेका हुन्छन् । ती राशि अनुसार मानिसको स्वभाव आचरण फरक रहेको हुन्छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसहरूको प्रेम सम्बन्छ पनि फरक फरक हुने कुरा ज्योतिषहरू बताउँछन् । कुन राशिका व्यक्तिहरूको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ तरु हेर्नुहोस् उक्त राशिफलहरूः